लभ परेकी युवती लाई होटेलमा भेट्न जादा आफ्नै बुहारी परेपछि – Namaste Dainik
June 24, 2020 July 20, 2020 NamastedainikLeaveaComment on लभ परेकी युवती लाई होटेलमा भेट्न जादा आफ्नै बुहारी परेपछि
जेन्सी,सामाजिक सञ्जाल लभयर चलाउने गतिलो साधन भएको छ । कहिल्यै नभेटका र नदेखेकाहरु फेसबुक मा’र्फत सहजै साथी बन्छन् । कतिको घ’रबार बि’ग्रिएको छ भने कतिले बि’हेबारी समेत यही फे’सबुकले गराइदिएको छ । तर चीनमा एउटा य’स्तो घ’टना भएको छ,अनलाइनमा साथी बनेर भेट्न जाँदा स’सुरा बु’हारी पो प’रेछन् । एकआ’पसमा भेट्दा यी दुबै जना ला’जले पानी पानी मात्रै हुनु परेन्, बाबुले छोराको कु’टाइ समेत खा’नुपरेको समाचार एजे’न्सीहरुले जनाएका छन् ।
घ’टना चीनको हेलोगजियांग प्रा’न्तको हो । यी ससुरा र बुहारी दुबैले आफ्ना पति पत्नि लाई झु’क्का’ए’र च्या’ट गर्थे । दुवै जनाले आफ्नो नाम र फोटो समेत बदलेका थिए । अ’नजानवश च्या’ट’मा भएको भेट र कुराकानी माया प्रे’ममा प’रिणत हुन था’ल्यो । यसो त ५७ बर्षीया वां’ग लाई अनलाइनमा साथी बनाउने र च्या’ट गर्ने लत नै थियो । वांग आफ्नै बु’हा’री सँग कुरा गर्दा आफू एउटा क’म्पनीको नि’र्देशक भएको भनेर ढाँ’टथे, श्रीमतीको मृ’त्यु भइसकेकाले आफू ए’क्लै भएको ती महिलालाई ब’ताउथें ।
बु’हारी लिली पनि के कम ? उनी आफ्नो श्रीमान जे’लमा रहेकाले छोरासँग मात्रै ब’स्दै आएको ब’ताउँदै आएकी थिइन् । ह’रराति यी दु’ईबीच च्या’ट्मा कुरा हु’न्थ्यो । डेली पछि फोटो पठाउने कुरा भयो ।अनि दुबै जनाले आफ्ना साथीका राम्रा फोटो प’ठाइदिए । फोटो हेरिसकेपछि दु’बैजनाले बेलुकी स्था’नीय होटेलमा ६ बजे भेट्ने तय गरे । लि’ली र वांगबीच होटेलमा भेट्ने त’य भएकै दिन लिलीका श्री’मान या’त्राबाट घर प’र्किए ।
उनले च्या’टबारे सबै जानकारी पाएपछि दुबैलाई रं’गेहात समात्न होटलतिर लागे । डेलीलिली जब हो’टेलमा गएर कोठा ढ’कढकाईन् त्य’सपछि ढो’का खो’ल्दा आफ्नै स’सुरा पो परेछन् ।पछि श्रीमान पनि लिलीलाई प’छ्याउँदै होटल पुगेपछि ल’फ्डा सुरु भयो । लिलीका श्रीमानले बा’बु र श्रीमतीलाई कु’टपिट गरेपछि प्र’हरी आइपुग्यो । अहिले फे’सुबक लभको को च’क्करमा प्र’हरीले सा’सुबुहारीलाई के’रकार गरिरहेको छ ।
१० महिनाकी छोरी बचाउन २५ करोड लाग्ने ! नेपालमा उपचार असम्भव
सुन्तली आफैले सय जनालाई खाना पकाएर खुवाईन,रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने डर भो भन्दै भाबुक भइन सुन्तली (भिडियो)